Sina vita amin'ny kodiarana vita amin'ny kodiarana vita amin'ny kodiarana vita amin'ny firaka sy orinasa | Hanvos
Kodiarana sandoka namboarina tamin'ny kodiarana vita amin'ny firaka
Fitsaboana ambonin'ny tany Poloney, hosodoko
Inona no azontsika atao? Machining CNC
Fitsapana amin'ny radia sy miondrika
Fa maninona no mifidy antsika? Ekipa mpamolavola matihanina dia afaka mamorona endrika tonga lafatra
Fotoana fanaterana haingana.
Factory vidiny & kalitao tena tsara.
1.Mba manokana amin'ny famokarana sy famarotana kodiarana fiara vita amin'ny fiara mandritra ny 20 taona.
2: Omeo sary an'arivony an'arivony ny sary vokarin'ny kodiarana fiara hanaovana varotra ho anao.
3: Sambo miaraka amin'ny vidy ambany, visy avo lenta, valves, peratra afovoany miaraka mba hisorohana ny olana amin'ny fitadiavana kojakoja. Raha lehibe ny quatity kaomandy dia afaka maimaimpoana ny kojakoja.
4.OEM dia ekena, azo atao arakaraka ny fepetra takiana amin'ny antsipiriany.
5: Ny vidiny dia mety araka ny kalitao sy ny habetsany.
6: kodiarana mikorontana no tena vokarinay, vidiny ambany, kalitao ary fomba maro. lanja maivana, 18cm dia 8,5kg ihany… mamonjy angovo.
7: Fotoana famokarana fohy ho an'ny daholobe.
8: Fitaovana mandroso, fizotry ny famokarana fatratra, rafitra fanaraha-maso kalitao henjana ary nandalo ny fanamarinana ISO.
Momba ny fandoavana sy ny fandefasana
T / T 30% petra-bola sy fifandanjana raha adika B / L.
Fanaterana ambany sy fandefasana haingana
Misafidy ny fandefasana entana tsara indrindra azo trandrahana (amin'ny alàlan'ny DHL / UPS / FedEx / sns amin'ny alàlan'ny rivotra na an-dranomasina) izahay dia hanome anao antsipirian'ny fanarahan-dia raha vao mivoaka ny entana izahay.
Ningbo Hanvos Qiee Auto Parts Corporation dia manana rafitra fitantanana kalitao tonga lafatra sy fikarohana ary fanatontosana fahaiza-manao matanjaka. Ny orinasa amin'izao fotoana izao dia manana karazana kodiarana maherin'ny 300, manolo-tena amin'ny fampandrosoana ho orinasa mpamokatra matihanina izay manana karazana kodiarana alim-piarakodia fiara lehibe indrindra ao Shina. Ny kodiarantsika dia alefa any Etazonia, Canada, Russia, Italia, South Africa, Australia ary firenena hafa mihoatra ny 10 ary mitazona ny fiaraha-miasa maharitra amin'ny mpanjifa aman-jatony izahay.
Ny orinasa dia nanangana orinasa mpamokatra kodiarana alimina vita amin'ny alimina sy alikaola miaraka amin'ny varotra sy ny fampiroboroboana ny famokarana. Ny orinasa dia manana fitaovana famokarana mandroso sy fanodinana ary fitaovana fanandramana; manana tsipika fandokoana roa izahay, fitaovana milina folo napetraka. Ny haben'ny kodiarana alimo aliminioma dia 24 santimetatra, ny haben'ny kely indrindra dia 14 santimetatra, ary ny vokatra isam-bolana dia 50000. Manana mpiasa mihoatra ny 300 izahay, mpiasa matihanina sy teknika mihoatra ny 50, miaraka amin'ny fahaizan'ny fampandrosoana sy ny famokarana mahery.
Hanvos Qiee Auto Parts Corporation dia miorina eo atsinanan'ny faritra fampandrosoana ara-toekarena Binhai, mirefy 150 hektara. Ny fenitry ny fananganana orinasa mifototra amin'ny fenitry ny OE, andian-tsarimihetsika natsangana ao anatiny, ao anatin'izany ny faritra fanaterana namboarina, efitrano fandraisam-bahiny 147, efitrano fihaonambe lehibe, faritra fialamboly mpiasa sns. Ny kodiaran'ny Hanvos Qiee Auto Parts Corporation dia mandalo fitsapana indostrialy sy fanaraha-maso ny fomba fiasa matihanina manomboka amin'ny sehatra famolavolana ka hatramin'ny vokatra vita, mba hahazoana antoka fa ny kodiarana tsirairay dia mandalo ny fizahana kalitao mba hamidy. Ny vokatra sandoka sy fanariana dia manana haitao matotra momba ny sary hosodoko, chromatography ， coating elektroforetika, electroplating sns. miezaha hanao ny kodiarana tsirairay mba ho lafatra.
Hanvos Qiee Auto Parts Corporation dia mandinika ny antsipiriany tsirairay, miaraka amin'ny serivisy mialoha ny varotra matihanina ary ny serivisy ho an'ny mpanjifa matanjaka.
Manaraka: Kodiarana aluminium maivana, kodiarana maivana, kodiarana Aliminum maivana
Kodiarana mavesatra mavesatra, kodiarana hazavana, hazavana ...